Madaxweyne Farmaajo oo furay shir u dhexeeya dowlada dhexe iyo maamul goboleedyada | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne Farmaajo oo furay shir u dhexeeya dowlada dhexe iyo maamul goboleedyada
Madaxweyne Farmaajo oo furay shir u dhexeeya dowlada dhexe iyo maamul goboleedyada
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed Farmaajo ayaa furey shir u dhexeeya Dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada qeybta ka ah dowladda Federaalka.
Shirka waxaa goob joog ka ah Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre, waxaana inta uu socda looga hadli doonaa sidii loo xoojin lahaa xiriirka wada shaqeyneed ee u dhexe dowladda Federaalka iyo Maamul goboleedyada, xoojinta amniga.
Sidoo kale waxyaabaha kulanka looga hadlayo waxaa ka mid ah shir dhawaan la filayo in uu ka dhaco dalka Ingiriiska, kaasi oo ay dowladda qorsheyneyso inay la tegto ajende mid ah oo ka turjumaya xaaladda dalka.
shirka ayaa la filayaa marka uu dhamaado in laga soo saaro warmurtiyeed qeexaya waxyaabihii looga hadlay.
Previous articleQoysas ku nool tuulooyin ka tirsan Jowhar oo ka cabanaya dhibaatooyinka Al-Shabaab
Next articleWasiirka Gaashaandhigga oo guddiga abaaraha ku wareejiyay kaalmo lacag ah